Mucheko - Wikipedia
Muchidzidzo chePimanyika, mucheko (Cross-section) izwi rinoreva uso hunoonekwa kana chiumbwa chine mumhu chachekwa. Chiumbwa chinogona chiri kuchekwa zvichitevedza: mutsetse wakati sambamba nehwaro hwachakagara nacho, mutsetse wakarurama pahwaro, kana mutsetse unoita gonya ripi zvaro pahwaro.
Ruvanze rweMucheko (Cross-sectional area) - izwi iri rinotaura kukura kweuso hunoonekwa kana chiumbwa chine mumhu chachekwa. Muzvinyorwa zviri kutevera tichange tichidzidza pamusoro petsazaniso dzekutsvaka kukura kwakaita ruvanze rweMucheko.
Denderende ndicho chiumbwa chemunyonga (uri pamutsendo), unoonekwa panochekwa charaka zvichitevedza mutsendo nenzira inopa munyonga wakavharwa kwese (closed curve). Izvi zvinoreva kuti mutsendo wacho unocheka nenzira yokuti chiumbwa chinosara pachekwa chine munyonga chete pasina mutsetse wakati twasa; mutsendo haucheke hwaro kana chisuvi chiri pacharaka.
Denderedzwa ndicho chiumwa chinowanikwa kana charaka chachekwa zvichitevedza mutsetse wakati sambamba nehwaro hwechakara chakarurama.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mucheko&oldid=32882"
This page was last edited on 11 Kurume 2013, at 10:40.